Bvisa switch switch vagadziri & vatengesi - China Bvisa switch switch fekitori
GW-12 Kunze AC HV Bvisa switch
GW □ -12outout AC HV disconnect switch (disconnect switch for short hereunder) inoshandiswa mugetsi yemagetsi ine ratidziro frequency 50Hz, yakatarwa voltage 12kV, inonyanya kugadzirira kana kutyora dunhu pasi pemutsara ichipa magetsi mukati mekunze kwemagetsi ekuparadzira system michina. Ikoko anti-kusvibiswa mhando disconnect switch inogona kunyatso kugadzirisa iyo tsvina flash panguva yekushanda kuitira kuti isangane nezvinodiwa nevashandisi munzvimbo ine tsvina zvakanyanya.
GW9-24 Kunze AC HV Bvisa switch
GW9-24 (W) dzakateerana Kunze HV kukatanura switch ndeye imwechete pole dhizaini, iyo inoshandiswa kuvhura kana kuvhara maseketi pasi pemagetsi asi isina-mutoro mamiriro mune 24kV yekunze magetsi system. Iyo yakagadzika dhonza dhizaini uye yekuzvivharira-yega, uye mashandiro mashandiro neyakavhara hove-tsvimbo. Kupfuurirazve, Anti-kusvibisa mhando chinja inogona kunyatso gadzirisa kupenya nekuda kwekusvibisa panguva yekushanda kwekudonha switch kuti ugutse chinodiwa chevashandisi munzvimbo yakasviba zvakanyanya.
GW5-40.5 DZIDZA KUSHURE
GW5-40.5 yekunze yakakwira voltage disconnect switch inoshandiswa kugadzira kana kutyora yakakwira voltage wedunhu mune yakatarwa voltage 40.5kV, AC 50 / 60Hz system. Iyo inokwanisa kuvhura uye kuvhara diki capacitance uye inductive yazvino.
GW4-40.5 DZIDZA KUSHURE
GW4 mhando serial yakakwira voltage kukatanura switch inoenderana nezvinodiwa muGB1985-2004 Yakakwira-magetsi AC Kubvisa maSwitch uye maEngement switch, IEC62271-102: 2002AC Kubvisa maSwitch uye maSwitch eEngement, uye IEC60694: 1996 Yakajairika Chikamu cheKukwirira kwemagetsi switchgear uye Kudzora Midziyo.
GN30-12 (D) Series Indoor Yakakwira Voltage Disconnect switch
GN30-12 (D) kudimbura switch chinhu chemukati chemagetsi emagetsi emagetsi akayera 12kV, matatu-chikamu AC50 / 60Hz. Iyo inoshandiswa kugadzira kuzorora uye kuchinjisa zvazvino zveHV zvishandiso zvemagetsi pasi pemamiriro ane voltage uye isina-mutoro. Iyo switch inoshandira rotary inofamba yekutaurirana iyo yakaiswa pane switchgear nyore. It
inotora madziro kuburikidza nekumisikidza futi
GN19-12 (C) Series Indoor Yakakwira Voltage Disconnect switch
GN19-12 (C) yemukati HV disconnect switch inoshanda kune simba sisitimu yemagetsi voltage 12kV, AC 50 / 60Hz. Iyo yakagadzirirwa CS6-1 manyore-ekushandisa mashandiro uye inoshandiswa kutyora nekuita dunhu pasi peisina-mutoro. Kune mamwe maratidziro erudzi rwekusvibisa, mhando yepamusoro-soro uye mhando yemagetsi inoratidza.